Population Density Map Of Nepal (Photo credit: Wikipedia)
In Nepal, an elusive quest for consensus
एउटा भाषा छ, Esperanto नामको। त्यो कहीं पनि बोलिने भाषा होइन। बिभिन्न भाषा हरु मिसाएर बनाइएको भाषा त्यो। अंतर्राष्ट्रीय भाषा एउटा चाहियो भनेर बनाइएको। तर चलेन। कसैले pickup गरदिएनन्।
जातीय पहिचान नै नभएको भाषा अथवा धर्म अथवा भेषभुषा त्यस्तो छ कुनै नेपालमा? यदि पहिचान समस्या हो भने। पहिचान समस्या हो भने पहिचान मुक्त नेपालको निर्माण गरौं।
आफ्नो पहिचान र आफ्नो भाषा र आफ्नो भेषभुषामा देशको ढुकुटी रित्याउने तर अर्काको पहिचान को कुरा आउना साथ टाउको दुखाउने? आफ्नो पहिचान चाहिं चाहिने, अर्काको पहिचान विरुद्ध युद्ध ऐलान गर्ने?
पहिचान समस्या कहिले देखि भयो? पहिचान समस्या हुँदै होइन। अर्काको पहिचान मात्र समस्या भएको हो।
cultural diversity Esperanto ethnic diversity ethnic rights Kathmandu Nepal